Halabotry :: Roa vavy tratra namaky trano - ewa.mg
Halabotry :: Roa vavy tratra namaky trano
News - Halabotry :: Roa vavy tratra namaky trano
Naiditra am-ponja, eny Antanimora, ireo vehivavy roa tratra namaky trano teny Ambodirano-Androndrakely, omaly. Naman’ny tompon-trano ihany ny iray tamin’izy roa vavy ary efa mifankazatra tsara sy mifampiditra an-trano izy ireo. Nataony dika mitovy ny fanalahidin’ilay trano. Nohararaotiny ny fotoana tsy naha tao antrano ny tompony ka nalainy izay entana lafo vidy rehetra, tamin’ ny faran’ny herinandro teo.
Tonga nametraka fitoriana teny amin’ny Kaomisarian’ny polisin’ny Boriborintany faharoa, eny Ambohijatovo Ambony, ny tompon-trano taorian’izay. Nosamborin’ny polisy avy eo, ireo roa vavy noahiahiana, izay monina eny Ambodirano Androndrakely ihany koa. Tsy nananosarotra ny famotorana satria nanoro ny olona nivarotan’izy ireo ny entana avy nangalariny iretsy roa vavy. Tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo entana very araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Polisim-pirenena, omaly
L’article Halabotry :: Roa vavy tratra namaky trano est apparu en premier sur AoRaha.
Fifidianana loholona : niala tsy ho kandidà Randrianandrasana Auguste
Niala an-daharana. “Noraisiko izao fanapahan-kevitra izao mba ho tombontsoa ho an’ny firenena, indrindra ho antsika ato amin’ny faritanin’i Fianarantsoa. Tandrovy hatrany ny fihavanantsika.” Io ny fanambaran’ny kandidà ho loholohan’i Madagasikara, Randrianandrasana Auguste Philippe, amin’ny lisitra Fagnorolahy IAD ao amin’ny faritanin’i Fianarantsoa, momba ny fialana an-daharana tsy ho anisan’ny kandidà intsony amin’izany fifidianana izany.Nampitsahatra ny fampielezan-kevitra izy, ka manentana ireo mpifidy vaventy hifidy lisitra hafa. Nambarany fa tsy hisy ny fametrahany delegem-pifidianana amin’ny faritra iadidiany: Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe. Eo koa ny tsy maha tompon’andraikitra azy amin’izay ataon’ny mpiray lisitra aminy.Angatahiny ny hisian’ny fitoniana avy amin’ny komity mpanohana azy fa misy antony avokoa ny zava-drehetra. Notsofiny rano izay mbola hanohy ny fampielezan-kevitra. Tsy izy no hanao zavatra hampisy savorovoro eto amin’ny tany sy ny firenena, indrindra eo amin’ny faritanin’i Fianarantsoa. “Atao izay fomba fandaniana ny lisitra IRD”, hoy izy.R.Nd. L’article Fifidianana loholona : niala tsy ho kandidà Randrianandrasana Auguste a été récupéré chez Newsmada.
Festival d’art urbain : « Dérive urbaine » dans tout Tanà
Les artistes participants à la 7ème édition du festival d’art urbain pendant la visite des sites. La tendance mondiale, sur tous les domaines, est de partager, de communiquer sans intermédiaire En général, le public vient à l’art, mais pour cette 7ème édition du Festival d’Art urbain, initiée et organisée par « La Teinturerie », l’art et les artistes viennent au public. Du 5 au 14 mars, quatorze artistes déambuleront dans tout Tanà. Un grand événement annuel dédié aux « street arts » et à l’art en général. Au programme, un « Dérive urbain » ou « Renireny », presque dix jours de performances visuelles, d’art en milieu public. Fresques murales, photographie, danse, installation, musique, slam-poésie, sport extrême, rien ne sera laissé au hasard. D’Ambohipotsy à Mahamasina, en passant par Isoraka, Antaninarenina, Ambohijatovo ambony, Ampandrana et Faravohitra. Un espace où quatorze artistes issus de plusieurs disciplines, se rassemblent pour créer, partager et éduquer à travers l’art pour revaloriser la culture. Ce festival permet de mettre en lumière des destinations ignorées du tourisme traditionnel à Antananarivo. Photographes, musiciens, graffeurs… se produisent dans des rues, des ruelles, des places et des jardins publics. Les participants laissent libre cours à leur sens de la couleur, du son et du mouvement pour s’exprimer librement. Selon les organisateurs, « le festival d’art urbain est une occasion pour les artistes d’engager une discussion avec les citadins et de proposer un regard différent, voire une expérience nouvelle sur la ville, selon leurs propres perceptions de ce qu’est la ville et de ce qu’elle devrait être. Proposer un urbanisme nouveau, traverser les espaces pour en découvrir les ambiances nouvelles, expérimenter de nouvelles manières de vivre, réaliser ses désirs, le temps d’un festival sur le thème « Dérives urbaines ». Par ailleurs, le Festival d’Art Urbain est l’événement qui redéfinit le rôle de l’art et de l’artiste au sein de la société. Zo Toniaina L’article Festival d’art urbain : « Dérive urbaine » dans tout Tanà est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Festival d’art urbain : « Dérive urbaine » dans tout Tanà a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tahiry sy vakoka any ivelany: hatao lavanty ny akanjon-dRamasindrazana
Vaovao niparitaka be tamina tambanjotran-tserasera, omaly, ny hanaovana lavanty ny akanjon’ny printsesy Ramasindrazana, nenitoan’ny mpanjaka Ranavalona III. Raha ny voalazan’io vaovao io, anio talata 8 desambra no hanatanterahana izany ao Londres ka hiandraikitra ny fanaovana lavanty ny tranom-barotra Kerry Taylor Auctions. Vita amin’ny akora lafo vidy toy ny « velours de coton bordeaux » sy ny « satin rose cyclamen » ito akanjon’ny pintsesy Ramasindrazana ito ka tokony ho tany amin’ny taona 1897 no nahavitana azy. Vitsy ny vehivevy afrikanina nanana tahaka izany tamin’io fotoana io, raha ny voalazan’ny vaovao hatrany. Hamidy miaraka amina taratasy sy ny sary sarobidy maromaro ity akanjo ity ka hitentina 1 100 ka hatramin’ny 1 660 Euros izy ireo.Fantatra fa izany Clara Herbert izany no nanangona ireto fahatsiarovana ireto. Olona tsy nahafoy ny mpanjaka Ranavalona III sy ny fianakaviany izy io.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Tahiry sy vakoka any ivelany: hatao lavanty ny akanjon-dRamasindrazana a été récupéré chez Newsmada.
Kandidà Rajoelina tany Alaotra Mangoro: « Hamboarintsika ny lalam-pirenena RN 44 »
Nitohy tany amin’ny kaominina Didy sy Manakambahiny Andrefana ary hatrany Morarano Kraoma ny dian’ny kandidà Rajoelina amin’ny andro fahatelo amin’ny propagandy, omaly. “Hanao velirano aminareo aho fa hamboarintsika io lalana RN44 io amin’ny herintaona. Izaho tsy hamadika anareo sy ny vahoaka malagasy izany. Efa vita fanadihadiana tamin’ny fitondrana Tetezamita io », hoy izy. Nambarany fa amin’ny maha sompitr’i Madagasikara iny faritra iny, hojerena ny hampitomboana ny vokatra.Hamboarina ny tohodrano ao Ranomena hahafahana mampitombo ny velaran-tany ho volena. Hampiana amin’ny zezika ny tantsaha. Tahaka ny fampanantenany tany amin’ny faritra hafa momba ny tsy fandriampahalemana, nanteriny fa efa tonga ny “drones”. Hametrahana “puce” ny omby hanarahan-dia azy. Hividy helikoptera miisa 10 Hapetraka ny vondron-kery manokana hiady amin’ny asan-dahalo sy jiolahy ary ho avy ny helikoptera miisa 10. Homena fiofanana ao anatin’ny fotoana fohy ireo tanora tsy manana tany ary hahazo velaran-tany 10ha ahahafahany mamboly sy miompy. Nampanantena koa ny kandidà Rajoelina fa hatao kianja “synthétique”, manara-penitra ny ao Ambatondrazaka. Eo amin’ny fanabeazana sy ny fampianarana kosa, nambarany fa hatao manara-penitra ny sekoly, manomboka amin’ny EPP izany. Ahitana efitrano famakiam-boky sy ho an’ny informatika ny trano fianarana. Hataontsika EPP manara-penitra ny EPP rehetra. Tokony ho mailo amin’ny androm-pifidianana Mba hisy bibliothèque, salle informatique. Hatao manara-penitra ny hopitaly… “Hanampy anareo aho, ny tanora, ny tantsaha, ny vehivavy, ny tsy anasa, ny marefo. Ampio aho hahafahako manampy anao sy manavotra an’i Madagasikara. Mila mifanome tanana isika. Efa voalohany isika tamin’ny fihodinana voalohany ary mbola ho lohany isika hitondra ny firenena aorian’ny 19 desambra izao”, hoy ihany izy. Ankoatra izany, niantso ny rehetra ny tenany mba ho mailo amin’ny fifidianana ka nilazany fa tsy avela hisy hanodinkodina intsony ny safidy. “Efa nisy ny nangala-bato teo. Jereo tsara ny PV ka ampitahao raha mitovy eny amin’ny tabilao sy ny tatitra an-tsoratra. Handefa angidimby aty aho haka ny voka-pifidianana aty”, hoy ny kandidà Rajoelina. Randria L’article Kandidà Rajoelina tany Alaotra Mangoro: « Hamboarintsika ny lalam-pirenena RN 44 » a été récupéré chez Newsmada.
Impact Madagascar: tohanana ara-bola ireo polisin’ala sy rano
Laharam-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana, toy ny iandraiketan’ny Impact Madagascar amina faritra maro. Tohanana ara-bola ireo polisin’ala sy polisin-drano mandalo fotoan-tsarotra, noho izao Covid-19 izao.Ahitana ny ezaka ataon’ny Impact Madagascar any amin’ny faritra misy ala sy mando : Madiromirafy – Maevatanana (Betsiboka), Ankirihitra-Mariarano (Boeny) sy Mahajeby (Bongolava). Saingy noho ny fikatsoan’ny fizahantany aty Afrika sy Madagasikara, betsaka ny asa very mifandray amin’ny fiarovana ny zavaboary amin’ireo toerana ireo, noho ny faharavana hita. Tandindonin-doza ny asa fampandrosoana maharitra, tanjona faritan’ny Impact Madagascar.Ity Covid-19 ity izao no antony tsy mampisy fidiram-bola avy amin’ny fizahantany any amin’ireo faritra ireo. Mihena, araka izany koa ny karaman’ireo polisin’ala sy polisin-drano, misy natsahatra amin’ny asany. Rava ao anatin’ny fotoana fohy ny ala sy ny zavaboary isan-karazany, asa natao ampolo taona maro.Anisan’ny mpikambana ao anatin’ny « Wildlife Ranger Challenge » ny Impact Madagascar, ahitana ireo mpiasa mpanara-maso ny anaty ala aty Afrika. Manangona tahirim-bola izany « Wildlife Ranger Challenge » izany ho fanohanana ireo polisin’ala anarivony ianjadian’ny voka-dratsin’ny valanaretina. Mahazo famatsiana avy amin’izany tahiry izany ireo mpiandry ala maherin’ny 60, miaro ny harena voajanahary tsy ho voatrandraka amin’ny tsy ara-dalàna sy potika. Misy hetsika manokana, ny 3 oktobra 2020, hanentanana firaisankina ho fanohanana azy ireo.Eo koa ny fiaraha-miasa amin’ny sampandraharam-paritra momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, afaka mampitombo ny fanaraha-maso anatin’ny faritr’ala sy mando, 40 900 ha. Avy amin’izany asa fiarovana izany ny ahafahan’ireo polisin’ala miantoka ny filàn’ny fianakaviany sy manohana ny fiarahamonina misy azy ireo. R.MathieuL’article Impact Madagascar: tohanana ara-bola ireo polisin’ala sy rano a été récupéré chez Newsmada.
Vaovaon’ny kitra : niverina any amin’ny kliobany ireo Barea
Omaly zoma tamin’ny 11 ora antoandro no niverina namonjy ny kliobany tsirairay avy ireo mpilalaon’ny Barea, rehefa avy namonjy ny fampivondronana voalohany, notanterahina teto Madagasikara nandritra ny hafoloana. Niara-dalana tamin’izy ireo ihany koa Rabesandratana Eric sy ireo mpiara-miasa aminy. Araka ny fantatra, any amin’ ny volana aogositra indray vao hiditra amin’ny fampivondronana faharoa ny Barea. Mbola mijanona eto an-toe­rana kosa i Ibrahim Amada fa ny 29 jona izy vao hamonjy ny ekipa hilalaovany any Qua­tar.Lasa atsy La Réunion i Arnaud (Ya Ya) Araka ny vaovao hita ta­min’ny tambajotran-tsera­sera, omaly, lasa nihazo ny Nosy La Réunion, omaly zoma ihany koa Randrianantenaina Arnaud (Ya Ya). Hilalao ao amin’ny JS St Pierroise, ny tovolahy. Raha ny fantatra, herintaona azo havaozina ny faharetan’ izao filalaovany ao St Pierre, izany. Tsy mbola fantatra kosa ny tentim-bidin’izao fifindran-toeran’i Ya Ya, izao. Tsiahivina fa vao 20 taona i Arnaud, amin’izao fotoana izao, ary anisan’ireo lohalaharana mahay mamono baolina. Efa nandrafitra ny Barea de Madagascar U20, niatrika ny Cosafa tany Zambia, ny taona 2018 izy.TompondakaL’article Vaovaon’ny kitra : niverina any amin’ny kliobany ireo Barea a été récupéré chez Newsmada.